DEG DEG:- Xildhibaano mooshin ka diyaarinaya golaha wasiirada cusub ee shalay lagu dhawaaqay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Xildhibaano mooshin ka diyaarinaya golaha wasiirada cusub ee shalay lagu dhawaaqay
Wararka naga soo gaaraya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in xidhibaano ka mid ah baarlamaanka maamulka Hirshabeele ay haatan diyaarinayaan mooshin ka dhan ah golaha wasiirada cusub ee uu shalay ku dhawaaqay madaxweyne Cali C/laahi Cosoble.
Xildhibaanada mooshinka wada oo tiro ahaan gaaraya illaa 50 ayaa la sheegayaa inay wadaan mooshin ay uga soo horjeedaan magacaabista uu madaxweynaha maamulka Hirshabeele Cali C/laahi Cosoble maalintii shalay kusoo magacaabay golaha wasiirada cusub ee maamulkaasi, kaas oo dhaliilo badan durbadiiba loo jeedinaayo.
Xildhibaanadaan ayaa ku eedeeyay madaxweyne Cali C/laahi Cosoble inuusan sameyn latashi, islamarkaana baal maray shuruucda u degsan awood qeybsiga beelaha dega gobolada Hiiraan iyo Sh/dhexe.
Madaxweyne Cali C/laahi Cosoble ayaa la sheegayaa in golaha wasiirada cusub uu kusoo daray nin ay saaxiibo gaar ah yihiin, islamarkaana ay dalka Canada isku meel wada degnaayeen.
Si kastaba ha ahaatee, lama oga halka uu ku dambeyn doonno mooshinkaan ay diyaarinayaan xildhibaaanda Hirshabeele oo tiro ahaan gaaraya 50 mudane, waxaana haatan magaalada Jowhar durbadiiba ka bilawday banaanbax aad u ballaaran oo looga soo horjeedo golaha wasiirada cusub ee uu ku dhawaaqay madaxweyne Cali C/laahi Cosoble.